I-GNOME izise ii -apps ezininzi kwi-GTK4 kunye ne-libadwaita kwiveki ephelileyo | Ubunlog
IPablinux | 08/10/2021 22:54 | gnome, Ubuntu
Ukuqhubeka namanqaku malunga yintoni entsha kwihlabathi le-GNOME, kule veki Baye bapapasha inqaku apho uninzi lwezi zinto sele zikhankanyiwe ngasentla zinento efanayo: izicelo eziye zasiwa (zabekwa) kwiGTK4 kunye ne-libadwaita. Ngapha koko, yonke into engezizo izicelo zomntu wesithathu ibandakanya "gkt4" ngandlela thile, kwaye inye kuphela yazo engabandakanyi libadwaita ngokunjalo. Ukongeza kwinguqulelo yedesktop, i-GNOME ikwanayo neselfowuni, kwaye kule veki babuyele ukuzazisa amanqaku amatsha malunga noku.
Las Izicelo eziziswe kwi-GTK4 kunye ne-libadwaita Zizo i-Disk Usage Analyzer, i-GNOME Tour, iZiko leSoftware, kunye nokuzibophelela. Ngapha koko, i-gtk-rs yongeze isahluko kwistokhwe kwincwadi yayo ye-gtk4-rs. Ukongeza koku, kule veki bathethe ngotshintsho ku-Phosh nakwizicelo zomntu wesithathu, Oko kukuthi, abayonxalenye ye-GNOME ngokusemthethweni, kodwa bayilelwe idesktop edumileyo esetyenzisiweyo, phakathi kwabanye, Ubuntu.
Yintoni eNtsha kwiSoftware yeQela lesithathu le-GNOME
Inkqubo yedemo yamasango sele ikhutshiwe kwiFlathub.
Isiteshi se-CI sikaPhosh gitlab.gnome.org ngoku sithatha ngokuzenzekelayo iifoto zesikrini kwiilwimi ezahlukeneyo (okwangoku sisiArabhu, isiJapan, nesiJamani). Oku kulindeleke ukuba kwenziwe kube lula kubaphuhlisi, abayili kunye nabaguquli ukuba bajonge utshintsho loyilo.
I-GNOME yokwenza ngoku isebenzisa iskimu sombala esitsha se-API esinikezwe yi-libadwaita ukulawula iindlela ezimnyama kunye nokukhanya. Isikhethi sesitayile sifumene nokuphuculwa kokubonakalayo.
Kwaye konke oko kunamhlanje. Nangona bathethile nangezicelo zomntu wesithathu, iindaba kule veki zezi zijolise ekuphuculeni ukungaguquguquki ye desktop, into ekulindeleke ukuba iphucule kakhulu xa kukhutshwa i-GNOME 42 ngo-Matshi 2022. Ukusukela kwiveki ezayo kude kube lelo xesha, abasebenzisi baka-Ubuntu Kuya kufuneka ihlawulele i-GNOME 40.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » gnome » I-GNOME izise ii -apps ezininzi kwi-GTK4 kunye ne-libadwaita kwiveki ephelileyo